ရခိုင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၈၈ ကျောင်းသားများ မေတ္တာရပ်ခံ
ရခိုင်ပြည်နယ်က ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၈၈ ကျောင်းသားများ မေတ္တာရပ်ခံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လတ်တလော ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ရပ်တန့်ဖို့အတွက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့က ဒီကနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြီး မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး
မေတ္တာရပ်ခံချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံသားတိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ထာဝရယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဘာသာ အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေ၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ရှိတဲ့ နိုင်ငံသားအနေနဲ့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
" ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း၊ ဘာသာအချင်းချင်း၊ မျိုးနွယ်စုအချင်းချင်း ဖြစ်တဲ့ပဋိပက္ခတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး မေတ္တာတရား ရှေ့ထားပြီးတော့ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သည်းညင်းခံပြီးတော့ ချဉ်းကပ်ကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဒီလက်ရှိသွားနေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းတွေကို ပိုပြီးအရှိန်အဟုန် ကောင်းလာအောင် ကြိုးစားကြဖို့နဲ့ လမ်းကြောင်းလွဲမသွားအောင် ဝိုင်းပြီးကရုစိုက်ကြဖို့ အဲတာကို ကျွန်တော်တို့ အဓိက အလေးအနက်ထားပြီးတော့ တိုက်တွန်းချင်တာပါ။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသား၊ အရပ်သားချင်းဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းရပြီ ဆိုရင်လည်း မလိုလားအပ်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တာဝန်ရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေအဖြစ်နဲ့ ခံယူပြီးတော့ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ကြီးထွားမလာအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ဒီကြေညာချက်ကို ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ပြန်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်"
ဒါ့အပြင် ကြေညာချက်မှာ အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ပြောင်းလဲမှုတွေကို အကျိုးမပြုနိုင်ရုံ မကဘဲ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် သွားနိုင်တဲ့ ထောင်ချောက်များ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုဖို့ လိုတယ်လို့လည်း ရေးထားပါတယ်။
Please be understood that this is crime and it is not happened in the civil war country. So it has to be clarify what who did it and what is the cause of this incident. Why simply can forget it by the statement that all has to be calmed down and patiently solve the problem themself rather than authority, for me it is very funny. HOW????
Jun 05, 2012 04:59 AM
MYO TINT SWE
VERY GOOD STATEMENT AND ALL PEOPLE FROM RAKHINE MUST BE UNDERSDTAND.
Jun 04, 2012 04:46 PM